२०७७ माघ १३ मंगलबार ०१:३८:००
देशभर ९० वटा खोप केन्द्र सञ्चालन गरिने
कोभिड– १९ विरुद्धको पहिलो खोप सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले लगाउने भएका छन् । टेकु अस्पताल देशको एक मात्र सरुवारोग अस्पताल हो ।
गत वर्षको ९ माघमा नेपालमा कोभिडको पहिलो केस देखिएको थियो । संक्रमित व्यक्ति ज्वरो र खोकीको समस्या लिएर उपचारका लागि टेकु अस्पताल पुगेका थिए । कोभिडको आशंकामा उनको स्वाब परीक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को हङकङस्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । कोभिड पुष्टि भएपछि टेकु अस्पतालमै राखेर उनको उपचार गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार टेकु अस्पतालमा खोपको शुभारम्भ भएसँगै बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पनि १० बजेकै समयमा खोप दिन सुरु गरिनेछ । तर, यी अस्पतालमा पहिलो खोप लिने कर्मचारीसहितको सूची भने तयार भएको छैन । ‘खोप १४ माघबाट सुरु गर्ने भन्ने तय छ, तर खोप लगाउने कर्मचारी सूची तयार भएको छैन । मंगलबार छलफल गरेर नाम टुंगो लगाउँछौँ,’ शिक्षण अस्पतालका कोभिड चिकित्सक डा. सन्तकुमार दासले भने ।
अक्सफोर्ड÷एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोपका १० लाख डोज भारतले अनुदानमा दिएको हो । गत बिहीबार खोप काठमाडौं आइपुगेको थियो । ‘कोभिसिल्ड’को आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिइसकेको छ । एस्ट्राजेनेका खोपको फर्मुला अपनाएर भारतमा ‘कोभिसिल्ड’ खोपको उत्पादन भएको स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।
सरकारले पहिलो चरणको खोप अभियानका लागि देशभरका ९५ अस्पतालमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा १७, मोरङमा तीन, कास्की र बाँकेमा दुई–दुई तथा बाँकी ७१ जिल्लामा एक–एक केन्द्र रहनेछन् । यसपछि १७ प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिँदा भने केन्द्रको संख्या बढाइनेछ ।
नयाँ खोप भएकाले सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूलाई केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा १२ वटा केन्द्र रहनेछन् । नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, कीर्तिपुर आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, टेकु अस्पताल, प्रसूतिगृह थापाथली, सिभिल अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज र गंगालाल अस्पतालमा केन्द्र रहनेछन् ।
सरकारले पहिलो चरणमा कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार नागरिकलाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो । तर, भारतबाट अनुदानमा १० लाख डोज खोप मात्रै आएको छ । एकजनालाई दुई डोज खोप लगाउनुपर्छ । १० देखि १५ प्रतिशत खोप खेर जान्छन् । यस हिसाबले करिब चार लाख नागरिकले मात्रै पहिलो चरणमा खोप पाउँछन् । तर, सरकारले खेर नजाने गरी चार लाख ३० हजार नागरिकलाई खोप दिने योजना बनाएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा पाँचदेखि ६ ठाउँ खोप केन्द्र राखेर अभियान चलाउन विज्ञहरूले सुझाब दिए पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अधिकारीहरूले काठमाडौंमा मात्रै ५० ठाउँमा खोप केन्द्र राख्न सुझाब दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र जिल्लामा खोप सञ्चालनका लागि ६२ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको छ ।
नेपालमा कोभिसिल्ड खोप
नेपालले खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोप भारतबाट आइपुग्यो (फोटोफिचर)
कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउन निजीलाई पनि खुला
कोभिड– १९ खोपको देशव्यापी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग (भिडियोसहित)
खोप लगाउन आनाकानी नगरौँ